शहिदहरुले देखाउनु भएको बाटोबाट अलिकति पनि बिचलित हुन्न: अध्यक्ष, राजन दाहाल
सर्व प्रथम त महान जनयुद्धमा सामेल भएर आफ्नो जीवन वलिदान गर्नुहुने बीर शहिदहरु, घाइते, अपांग, वेपत्ता परिवारजन प्रति उच्चसम्मान प्रकट गर्दछु । साथै २५ औं जनयुद्ध दिवशको यस अबसरमा शहिदहरुले देखाउनु भएको बाटोबाट अलिकति पनि बिचलित नहुने र उहाँहरुका आदर्श र भावनामा कहिल्यै पनि ठेस लाग्न दिने छैन ।
नेकपा सिन्धुलीले २५ औं जनयुद्ध दिवशलाई कसरी संझंदै छ ?
नेपालको राजनैतिक आन्दोलनको गौरवशाली इतिहास बनेको जनयुद्धलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले जिल्ला कार्यालयमा ए कार्यक्रमको आयोजनागरी संझँदैछ । जनयुद्ध अब माओवादीको मात्रै रहेन । सिंगो नेकपाको मात्रै नभएर सर्वहारा जनताको पुँजी पनि हो । जनयुद्धलाई कसैको आग्रह र पूर्वाग्रहले होइन । मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघीयताजस्ता मुलभूत कुराहरु जनयुद्धकै कारणले स्थापित भएका हुन् भन्ने कुरालाई नेकपाले स्वीकार गरिसकेको अबस्थामा जिल्ला पार्टीको निर्णय अनुसार जनयुद्ध दिवश मनाउँदैछौं ।
तपाईहरुले जनयुद्ध दिवश मनाइरहंदा पार्टी नेतृत्वले युद्धका घाइते, अपांग र वेपत्ता परिवारलाई बेवास्ता गरिएको छ भन्छन् नि ?
जनयुद्ध मुलभूत रुपमा सामान्तवादका बिरुद्ध, आम नेपाली शोषित पिडित किसान, मजदुर तथा आम शोषित, पिडित एवम् गरिखाने वर्गका लागि गरिएको थियो । त्यसले उनीहरुका मुद्धालाई स्थापित गरिदियो । अहिले संविधानमा उल्लेख भएको गणतन्त्र, समाजवाद, आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण सहितको आर्थिक सम्वृद्धिका विषयहरु जनयुद्धले स्थापित मुद्धाहरु थिए । नेकपा माओवादीको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले उठाएका सबै मुद्धाहरु समावेश गर्न नसकिएपनि ८० प्रतिशत मुद्धाहरु हाम्रो संविधानमा समावेश भएका छन् । जनताको गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार जस्ता विषयहरु हाम्रो संविधानमानैं उल्लेख भएको छ । हामीले कम्युनिज्म राज्य व्यवस्थाको जस्तै संविधान बनाएका छौं । यी सबै कुरा महान शहिदहरुले वगाएको रगतको जगमा स्थापित भएका हुन् । रगतकै जगमा हामीहरुले ठिाएका मुद्धाहरु संस्थागत पनि भएका छन् । विगतको त्याग र तपस्याप्रति हामीहरु गर्व गर्छौं । हाम्रा वेपत्ता, घाइते, अपांग तथा शहिद परिवारहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुकै त्यागले मुलुक यहाँसम्म आएकाले उहाँहरु पनि त्यसलाई गर्व गर्नु हुन्छ । स्वभावैले हामीले सत्तामा रहँदा वा नरहँदा पनि आफ्ना तर्फबाट गर्ने राहत तथा उपचारका सन्दर्भमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेका छौं । पार्टीमा पनि उचित स्थान दिएका छौं । उहाँहरुलाई सम्मान गर्ने र भूमिका दिने कुरामा पार्टीका तर्फबाट कुनै कमी आएको मैंले देखेको छैन ।
जनयुद्ध लडेर आएको र संसदीय अभ्यासमा रमाएको पार्टीका बीचको एकता र राजनैतिक कार्यदिशा हेर्दा कतै बिचलन आएको त होइन ?
तत्कालिन, सामन्त, जमिनदार नोकरशाही दलाल पुँजीपति वर्गको शासन सत्तालाई नियन्त्रणमा राख्ने जुन उदेश्यले जनयुद्धको थालनी भएको थियो । सामान्तवादको समुल अन्त्य गर्ने कुरा गरेका थियौं । हाम्रो वर्ग संघर्षको स्वरुप बदलिएको छ । तर हामीले लिएका बिचार,सिद्धान्त र कार्यनीतिहरु फेरिएका छैनन् । गरिवलाई धनी बनाउने, बिपन्नलाई सम्पन्न बनाउने र सामाजिक न्यायसहितको समतामुलक समाज निर्माण गर्ने हाम्रा मुलभूत उदेश्यहरु थिए, ती उदेश्यहरु मार्फत समाजवादमा पुग्ने बाटोमा हामी अलिकति पनि बिचलित भएका छैनौं । जुन उदेश्यका साथ हामीले जनयुद्ध लड्यौ, हाम्रा साथीहरुले बलिदान दिए, त्यसैको कारण आज दुई कम्युनिष्ट पार्टीको एकता भएको हो । समाजवादमा बहुसंख्यक जनताको प्रतिनिधीत्व गर्नुपर्छ, एक्लै हिंडेर संभव थिएन, त्यसैले बैधानिक ढंगबाट समाजवादको यात्रालाई सहज बनाउन दुई पार्टीको एकता भएको हो । विचार र सिद्धान्त एउटै भएपछि एक्ला एक्लै त हिंड्नु भएन नि ? भन्ने प्रश्नले हामी मुलुको शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी बनेका छौं । बिचारमा एकरुपता र कार्यनीतिमा एकरुपता र पार्टीमा एकमना एकता कायम भएको अबस्थामा बाहिर प्रचार गरिए जस्तो हामीमा कुनै पनि बिचलन आएको छैन । त्यो प्रचारवाजी मात्रै हो ।
तर तपाईले पार्टीमा एकमना एकता छ, भनिरहंदा सिन्धुली जिल्लामा दुई घार त प्रष्ट देखिंदै छ नि ?
मुलभूत रुपमा पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीका सबल पक्षहरु अहिले पार्टीमा हावी भइरहेकाछन् । पार्टी एकता हुँदा त्यसका केही दुर्बल पक्षहरु पनि साथै आएकाछन् । नराम्रा प्रवृतिहरु हाबी हुन्थे भने पार्टी एकता पनि हुँदैनथ्यो । यो बीचमा क्रान्तिकारीहरुनैं हाबी भएर दुई पार्टी एकता भएको हो । तर अहिले अराजकता, गुटबन्दी र अनुशासन हिनता जस्ता कुराहरु हामीसँगै आए । पार्टीभित्र बढेको अराजकता गुटबन्दी र अनुशासन हिनतालाई नियन्त्रण गर्नका लागि पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकले अध्यक्ष प्रचण्डले राख्नु भएको प्रस्तावलाई सिंगो केन्द्रीय समिति बैठकले पारित गरेको छ । कसैको छहारीमा बसेर कुरा गर्ने स्थिति पनि रहेन । गुटबन्दी, अराजकता र अनुशासनहिनताको कुनै पनि छनक नदेखिइकन बैठक सकियो । अहिले तपाईले सिन्धुलीमा जे देखिरहनु भएको छ, पार्टीले सञ्चालन गर्ने ६ महिने अभियानपछि त्यो अबस्था देख्न पाउनुहुने छैन । अब पनि यो पार्टीमा पूर्व एमाले वा पूर्व माओवादीका नाममा आग्रह वा पूर्वाग्रह लिएर जो कोही हिंड्न खोज्छ, त्यो पछाडी पर्छ । दौडिरहेको गाडीमा केही यात्रीहरु छुट्न सक्छन् । तर तपाईले भनेजस्तो सिन्धुलीमा दुई धार छैन । जिल्ला संगठन समितिको बैठकपछि वा औपचारिक फोरममा कुनै मतभेद छैन, र म अध्यक्ष भएका नाताले पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी जस्तो महशुश गरेको पनि छैन । आफ्नो कमजोरी छोप्न कसैले पछाडि फर्केर पूर्व एमाले वा पूर्व माओवादी त भन्ला तर अब हामी पुराना पार्टी होइन, सिंगो एक ठिक्का नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र त्यसका कार्यकर्ता हौ । त्यसैले हामी अनुशासित र गतिशिल ढंगले पार्टी सञ्चालन गर्छौं । मलाई अलिकती पनि अप्ठ्यारो पर्ला कि ? भन्ने लागेकैछनै । विगतमा सिन्धुली जिल्लाले सिंगो कम्युनिष्ट आन्दोलनलाइ जुन सहयोग गरेको थियो त्यो भन्दा बढी सहयोग पु¥याउने ताकत राख्छ ।
अन्त्यमा सिन्धुलीवासी जनतालाई के सन्देश दिन चाहानुहुन्छ ?
सर्व प्रथम त म महान जनयुद्धमा सामेल भएर आफ्नो जीवन वलिदान गर्नुहुने बीर शहिदहरु, घाइते, अपांग, वेपत्ता परिवारजन प्रति उच्चसम्मान प्रकट गर्दछु । साथै २५ औं जनयुद्ध दिवशको यस अबसरमा शहिदहरुले देखाउनु भएको बाटोबाट अलिकतिपनि बिचलित नहुने र उहाँहरुका आदर्श र भावनामा कहिल्यै पनि ठेस लाग्न दिने छैन । म सिन्धुलीवासी दाजुभाई दिदी बहिनी र सिंगो पार्टी पक्तिमा शुभकामना व्यक्त गर्दछु । हामी समाजवादको यात्रमा छौं र सिंगो पार्टीले आर्थिक सम्वृद्धिसहितको यात्राको नेतृत्व गरिरहेको छ । त्यसैले सवै सिन्धुलीवासी जनतालाई एक ढिक्का भएर समाजवादी यात्रामा लाग्न अपील पनि गर्दछु ।
Times 1121619	Visited.